Al Shabaab oo fadwo ka soo saartay arrimaha doorashooyinka iyo ciidamada Itoobiya – Somali Top News
Al Shabaab oo fadwo ka soo saartay arrimaha doorashooyinka iyo ciidamada Itoobiya
Dagaalyanada Al-shabaab oo ka taliya degaanno ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayaa Fatwo ka soo saaray arrimaha doorashooyinka heer Federaal oo qorshaysan in Soomaaliya laga qabto bilowga sanadka soo socda ee 2021-ka.
Bayaan Fatwo ah oo ka soo baxay Xarakada Al-shabaab, ayaa lagu sheegay in ay xaaraan tahay doorashada la doonayo in dalka laga qabto sannadka 2021-ka, islamarkaana waxaa Al-shabaab ku hanjabtay in ay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ka qeyb-qaadata arrimaha doorashadaas.
Al-shabaab ayaa sidoo kale fatwootay in laga hortago hirgelinta Nidaamka Federaalism-ka dalka Soomaaliya, kaas oo ay ku sheegeen mid dalka Soomaaliya loogu gacan-gelinayo kenya iyo Itoobiya, una horseedaya colaad sokeeye iyo kala qoqob dhuleed.
Bayaanka ka soo baxay Al-shabaab oo ka kooban 14 qodob ayaa dhinaca kale lagu fatwooday in la laayo muhaajiriinta u dhashay waddanka Itoobiya ee ku soo qulqulaya gudaha dalka Soomaaliya, waxaana Al-shabaab amartay in meeshii lagu arko lagu dilay Tahriibayaasha u dhashay Itoobiya.
Bayaanka oo ay soo saareen 40 sheekh oo ka tirsan Al Shabaab ayaa waxa uu ku qoranyahay luuqada Carabiga waxaana lagu baahiyay warbaahinta ku hadasha Afka Al Shabaab.
← Farmaajo oo bogaadiyay horumarka laga gaaray deyn cafinta dalka
Taliska Xoogga dalka oo sheegay iney xubno shabaab ah ku dileen Deynuunay →
Qoyska Sacuudi Carabiya oo go’aan ka qaadanaya Maxamed Bin Salmaan
Isbedal lagu sameynayo hanaanka dalacsiinta ciidamada Soomaaliyeed
December 31, 2018 Somali Top News 0